Erdogan oo dood ka keenay doorashada lagaga guulaystay | Goojacade
Home War Erdogan oo dood ka keenay doorashada lagaga guulaystay
Erdogan oo dood ka keenay doorashada lagaga guulaystay
Xisbiga AK ee Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa dood ka keenay guusha ay mucaaradku ka gaareen doorashadii magaalada dalkaas ugu wayn ee Istanbul, iyadoo dhibco aad u yar lagaga raayay.
Doorashii golaha deegaanka ee Axaddii ka dhacday Turkiga ayuu xisbiga CHP sidoo kale ku hantiyay maamulidda magaalada caasimadda ah ee Ankara iyo Izmir.
Xisbiga AK ayaa sheegay in ay wax isdabo marin dhacday, wuxuuna dood ka keenay deegaan walba oo Istanbul ku yaalla, natiijada rasmiga ah ee la baahiyay ayaase muujinaysa in xisbiga CHP uu magaaladan ku hoggaaminayo 25,000 oo cod.
Boorarkii waawaynaa ee Guulihii ay xisbiga AK guusha ku sheeganayeen ayaana meesha ka baxay.
Xisbiga cilmaaniga ah ee CHP ayaa cambaareeyay tallaabada uu qaaday xisbiga talada haya ee diinta Islaamka ka shidaal qaata, waxayna sheegeen in Xisbiga AK uu rabo in uu ku shubto codadka.
Xisbiga AK ayaa sidoo kale dacwad ka gudbinaya guusha uu xisbiga CHP ka gaaray magaalada Ankara.
Qaybo ka mid ah warbaahinta ay inteeda badan dawladdu maamusho ayaa baahinaya eedaymo sheegaya in wax isdabo marinno dhacay ay horseedeen guuldarrada xisbiga talada haya.
Xisbiyada mucaaradka ah oo horay doorashooyinka uga gudbin jiray dacwado ayaa ku guul darraystay in ay natiijo ka soo hoyiyo.
Ma dhirbaaxo wayn ayay ku tahay Erdogan?
Dalka oo dhan marka laga hadlayo xisbiga wadaagga ah ee AK ee madaxweynaha ayaa ku guulaystay 51.6%.
Balse Istanbul ayaa ku jirtay gacanta xisbiga uu Erdogan ku jiro tan iyo sannadkii1994-tii markaas oo loo doortay duqa magaalada.
Mark Lowen oo ah wariye BBC-da ka tirsan oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa sheegaya in guuldarrada magaalooyinka waawayn ay dhirbaaxo ku tahay Erdogan, ayna waxyeelo u gaysanayso sawirkii laga haysatay.
Doorashadan ayaa loo arkayay in ay afti u tahay 16kii sano ee uu xukunka soo hayay Erdogan, waxayna ku soo hagaagtay iyadoo dhaqaalaha dalku liito.
Lacagta Turkiga ee Iira ayaa qiimo beelaysay dhawaanahay, dhaqaalaha dalka ayaana hoos u dhacay saddexdii bilood ee ugu dambeeyay sannadkii hore ee 2018. Sicir bararka ayaa kor ugu kacay 20% isla sannadkii hore, shaqo la’aanta ayaana sidoo kale korortay.
Wariyaheennu wuxuu leeyahay Erdogan wax afti u eg ayuu naftiisa galiyay, mucaaradka oo wakhti dheer u muuqday kuwo kala qaybsan oo rajo la’aan ah ayayna yididiilo soo gashay.
Dad badaan oo reer Turki ah ayaa wali la dhacsan Erdogan, balse kala bar dadka ku nool dalkaas ayaa dariiqiisa ka weecday, waxayna billaabayaan in ay rumaystaan in uu yahay mid laga guulaysan karo, ayuu intaas ku sii daray Mark Lowen.
Natiijooyinka sidee loo kala helay?
In kabdan 57 milyan oo ruux ayaa isu diiwaan galisay codaynta in ay ka qayb qaataan doorashooyinka duqa magaalada ee caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalkaas oo dhan. Dadka doorashada u soo baxay ayaa aad u sarreeyay waxyar ayayna ka hooseeyeen 85%.
Wakaaladda wararka ee Anadolu ee dawladda ayaa tabisay in sidan loo kala helay codadka:
•	Istanbul – 48.8% CHP, 48.5% AKP
•	Ankara – 50.9% CHP, 47% AKP
•	Izmir – 58% CHP, 38.6% AKP
Xisbiga talada haya ee AK ayaase sheegay in murashaxooda Istanbul Binali Yildirim uu ku horreeyay 4,000, ninkan oo horay Ra’iisulwasaare u soo noqday ayaase markii dambe qiray in codad yar lagaga guulaystay, intaas markii ay dhacday ka dib ayuu xisbiga AK soo rogaal celiyay oo guul sheegtay.
Previous articleRa’iisulwasaaraha Itoobiya oo Jigjiga ka dagay
Next articleAxmed Madoobe oo ku dhowaaqay inuu heshiis la galay madaxda dowladda